ရှေးဦးဆုံး ကျောက်စာရေးထိုးသောလူမျိုးမှာ ဘယ်လူမျိုးလဲ? - Chelmo News Portal
Home›Knowledge›ရှေးဦးဆုံး ကျောက်စာရေးထိုးသောလူမျိုးမှာ ဘယ်လူမျိုးလဲ?
ရှေးဦးဆုံး ကျောက်စာရေးထိုးသောလူမျိုးမှာ ဘယ်လူမျိုးလဲ?
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကျောက်စာရေးထိုးတဲ့ဓလေ့ ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာက ဘီစီ(၃၆၀၀) ခန့်လို့ ယူဆရပါတယ်။ ရှေးဦးစွာ ကျောက်စာရေးထိုးသော လူမျိုးက အီဂျစ်လူမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ အီဂျစ် ပြည်သူတွေက ဟိုင်ယာရိုဂလစ်ခေါ် ရုပ်ပုံစာအမှတ်အသားနဲ့ ဘုရင်သင်္ချိုင်းတွေ၊ အထိမ်းအမှတ် အဆောက်အအုံတွေမှာ ရေးထိုးထားခဲ့ကြတယ်။
အီဂျစ်နိုင်ငံမှာ ဘီစီ(၃၄၀၀) မှ (၂၇၀၀) အထိ နှစ်အမည်တွေကို ရေးမှတ်ထားတဲ့ ကျောက်တုံးတစ်ခုကို တွေ့ရှိတဲ့အတွက် ယခု စစ္စလီကျွန်း ပါရာမိုပြတိုက်မှာ ထားရှိထားပါတယ်။ အဲ့ကျောက်တုံးကိုတော့ ပါလာမိုကျောက်စာလို့ ခေါ်ကြတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလည်း ကျောက်စာရေးထိုးတဲ့ခေတ် ရှိခဲ့ပါတယ်။ ရှေးအီဂျစ်နိုင်ငံ ဗက်ဗီလုံးနိုင်ငံများရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုခေတ်နဲ့ တစ်ခေတ်တည်းမှာပဲ ကျောက်စာရေးထိုးခြင်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ အခြားထင်ရှားခဲ့တဲ့ ကျောက်စာတွေကတော့ ဘီစီ(၂၅၀) ခန့်က စိုက်ထူခဲ့တဲ့ သီရိဓမ္မာသောက ကျောက်စာတွေပဲဖြစ်တယ်။
သီရိဓမ္မာသောက မင်းတရားကြီးက ဗုဒ္ဓမြတ်စွာနဲ့ စပ်လျဉ်းတဲ့ထင်ရှားတဲ့နေရာတွေမှာ အထိမ်းအမှတ်ကျောက်စာတိုင်တွေ စိုက်ထူခဲ့တဲ့အပြင် မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ ဆုံးမသြဝါဒတွေကိုလည်း နိုင်ငံတော်အတွင်း နေရာအနှံ့အပြားမှာ ကျောက်ထက်ရေးထိုးစေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ သီရိဓမ္မာသောက မင်းကြီရဲ့ ကျောက်စာတိုင်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံမှာလည်း ဘီစီ(၂၀၀၀)ခန့် ရှန်မင်းများလက်ထက်က စာပေရေးသားတတ်မြောက်ကြပေမဲ့ ကျောက်ထက်မှာရေးထိုးလေ့မရှိဘဲ ဆင်စွယ်၊ လိပ်ခွံတွေနဲ့ ဝါးများ အပေါ်မှာသာ ရေးမှတ်လေ့ရှိကြတယ်။ ခရစ်သက္ကရာဇ် (၂၀၀) ခန့်မှ တရုတ်စာကောင်းပေကောင်းတွေကို ကျောက်ပြားများပေါ်မှာ ရေးထိုးပြီး အဲ့မှတစ်ဆင့် စက္ကူနဲ့ ကူးယူတဲ့အကျင့်ကို အသုံးပြုလာကြတယ်။ရှေးဟောင်း တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ကျောက်စာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျောက်စာရေးထိုးတဲ့ အကျင့်က သရေခေတ္တရာခေတ်က စတင်ပေါ်ပေါက် လာခဲ့ပါတယ်။ သရခေတ္တရာမြို့ဟောင်းမှ တူးဖော်ရရှိတဲ့ ကျောက်အရိုးအိုးများမှာ ပျူဘုရင်ဘွဲ့တွေနဲ့ ပျူဘုရင်မင်းများရဲ့ နတ်ရွာစံသက္ကရာဇ် တွေကို ရေးထိုးထားတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ပုဂံခေတ် မြန်မာလူမျိုးတို့က အထူးသဖြင့် ဘုရားတည်၊ ကျောင်းဆောက် စတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေ ပြုလုပ်တဲ့အခါ အလှူပစ္စည်းစာရင်း နဲ့အတူ ဆုတောင်းစာတွေ ကျိန်စာတွေကို ကျောက်ထက်မှာ ရေးထိုး မှတ်တမ်းတင်ကြပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တွေရတဲ့ ကျောက်စာများထဲတွင် ပုဂံမြို့မှ မြစေတီကျောက်စာကတော့ အထူး အရာရောက်တဲ့ ကျောက်စာတစ်ချပ်လည်း ဖြစ်တယ်။ ကျောက်စာမှာ အကြောင်းအရင်း တစ်မျိုးထည်းကိုပဲ ကျောက်တိုင် (၄) မျက်နှာတွင် မြန်မာ၊ မွန်၊ ပါဋ္ဌိ၊ ပျူ ဟူတဲ့ ဘာသာကြီး (၄) မျိုးနဲ့ ရေးထိုးထားခဲ့ပါတယ်။ မြစေတီကျောက်စာကို လေ့လာခြင်းကြောင့် ပုဂံခေတ်မှာ သုံးနှုန်းထားတဲ့ ဘာသာစကားတွေကိုလည်း သိရှိနိုင်ပါတယ်…